Tato anjely sy demonia | Ny fanaovana tatoazy
Tato anjely sy demonia
Nat Cerezo | | Tatoazy ara-pinoana
Ao anatin'ny tontolon'ny tombokavatsa, raha miresaka momba ny tombokavatsa amin'ny fomba ara-pivavahana na "ara-panahy" isika, dia samy manana ny tombokavatsa anjely sy ny demonia. Ary izany ve io dia iray amin'ireo fanehoana malaza indrindra ao anatin'ity sokajy tatoazy ity.
Izany no antony hiresahantsika anio momba ny tombokavatsa an'ny anjely sy ny demonia. Izahay dia mitady ny antony na antony manosika olona mety hanao tatoazy na demonia na anjely. Ary raha liana amin'ilay lohahevitra ianao dia aza adino ny mamaky ity lahatsoratra ity tombokavatsa nahazo aingam-panahy anjely.
1 Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy
2 Hevitra ho an'ny tatoazy demonia
2.1 Demony manidina
3 Ny dikan'ny tatoazy anjely
4 Hevitra tatoazy anjely
4.1 Ilay anjelin'ny Fahafatesana
4.2 anjely Mpiambina
4.3 Anjely nianjera
4.5 Elatra anjely
4.6 Karazana anjely hafa
5 Tato anjely sy demonia mifangaro
6 Sarin'ny Tatoazy anjely sy demonia
Raha ny demonia, ny famelana ireo mety hanondroana ny satanisma na ny mpanompo sampy izay amin'ny ankamaroan'ny olona manaraka azy dia tsy mahalala ny fiaviany, ny tombokavatsaon'ny demonia dia napetraka ho mariky ny tsy fankatoavana. Fomba iray hanehoana ny fikomianay amin'ny fanajana ny fiaraha-monina izay misy ankehitriny amin'ny ankamaroan'ny sosona ao amin'ny fiarahamonina. Ho an'ny olon-kafa, ny tombokavatsa demony dia tandindon'ny faharatsiana, fahalotoam-pitondrantena, na fitiavan-tena miorina amin'ny fanjakan'olombelona.
Hevitra ho an'ny tatoazy demonia
Raha ny anao no satana avy any amin'ny afobe ary te-hanao tombokavatsa amin'ny hoditr'izy ireo ianao, nanomana hevitra vitsivitsy izahay hanomezana aingam-panahy anao.
Misy fomba maro hanehoana demonia, saingy mazàna manana endrika humanoid izy ireo ary mety manana elatra na tsia. Mampatahotra izany amin'ny tenany, fa alao sary an-tsaina izao fa loha fotsiny manana elatra ... Raha mahita zavatra toy izany isika dia mety manomboka mihazakazaka midina amin'ilay tendrombohitra. Mazava ho azy, toy ny tatoazy dia milay be.
Any Japon dia manana ny endrik'ireo demony ihany koa izy ireo. Izy ireo dia fantatra amin'ny hoe oni ary ny fisehoany dia mitovy amin'ny an'ny demonia na ogres tandrefana. Izy ireo dia misolo tena ny claws ary, amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny tandroka iray na roa. Ny lokon'ny hoditr'izy ireo dia matetika miovaova eo amin'ny mena, manga, mavokely, mainty na maitso.
Raha te hanana endrika masiaka kokoa izy ireo matetika dia mitafy hoditra tigra ary manao a kanabō, fitaovam-piadiana ampiasaina amin'ny vanim-potoana feudal ary misy tehina mifono vy misy studs.
Ireo zavaboary ireo dia naseho tamin'ny manga sy anime maro be. Na dia amin'ny lalao video isan-karazany aza, toa ny CD Projekt farany, Cyberpunk 2077, izay misy ny onjam-peon'ny Samurai dia onnet cybernetika.
Toa io teny io baphomet (izay miankina amin'ny fiteny sy ny fomba ampiasana azy dia mety misy dikany maromaro) no iray ampiasain'ny mpanao fikarohana mba hahatonga ny fianjeran'i Templars ho mpivadi-pinoana.
Na izany aza, amin'ny lahatsoratra hafa amin'ny Templars Baphomet dia faritana ho karazana devoly, hermaphrodite, miloko mainty, misy tratra, volombava ary tandroka. Na dia toa toa tsy azo aseho aza izany fampahalalana izany amin'ny alàlan'ny herin'ny maizina amin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo.
Ny dikan'ny tatoazy anjely
Miroso amin'ny tattoosin'ny anjely izy ireo dia mampiseho toetra ara-pivavahana miharihary ary tena miely patrana amin'ny tontolo tandrefana. Ny anjely dia mihevitra ny fisehoan'ny olona manana elatra izay iraka ny hampita ny tenin'Andriamanitra amin'ny olombelona. Izy ireo dia maneho ny finiavana, fahasoavana, hatsaran-tarehy ary fahalavorariana.
Na dia tsy ny zava-drehetra momba ny anjely aza dia misy ifandraisany amin'ny fivavahana katolika, dia marina fa ny fivavahana no manana ny hevitry ny anjely miorim-paka lalina indrindra. Fa ny mahaliana dia ny teny hoe "anjely" dia avy amin'ny latina "Angelus”Izay avy amin'ny teny grika“ ἄγγελος ”(anjely) izay midika hoe“ mpitondra hafatra ”. Toa io anarana io dia efa nampiasaina tamin'ny pantheon grika ho an'i Angelia, izay iraky ny andriamanitra sy ny zanakavavin'ny andriamanitra Hermes.
Hevitra tatoazy anjely
Tatoazy anjely Izy ireo dia tsy cheesy fotsiny ary feno elatra masina, meh, ary taratraIndraindray izy ireo dia mety ho ny ratsy indrindra. Izahay dia nanomana kely ny zavatra rehetra ho anao amin'ity fifantenana ity.
Ilay anjelin'ny Fahafatesana
Toa teo amin'ny jiosy sy ny silamo ny anarana nomena ny anjelin'ny fahafatesana dia Azrael, izay manana ny iraka raiso ny fanahin'ny maty dia ento izy ireo mba hotsaraina. Amin'ny tatoazy, dia matetika no anehoana toy ny taolana misy elatra.
Amin'ny Kristianisma, Na dia tsy misy anaram-boninahitra manokana anjelin'ny fahafatesana aza, io fiasa io dia hianjera amin'ny arikanjely Michelangelo. Indraindray ny fahafatesana dia afangaro amin'ny anjely iray mba hanomezana ny fikasantsika hitantsika amin'ny tatoazy manaraka.
Io karazana anjely io dia miely be amin'ny Katolika. Inoana fa ny olona tsirairay dia manana anjely mpiambina izay mitarika azy sy miaro azy amin'ny fakam-panahy mba hidirany any an-danitra. Izy io koa dia mety ho olon-tiana iray izay nodimandry ary mijery ny fiarovana antsika. Matetika aseho amin'ny anjely mijery ambany izy io, toy ny hoe mikarakara antsika izy.
Amin'ny lafiny iray, azontsika atao ny manambatra ny karazana tatoazy anjely mpiambina amin'ny zavatra miaramila kely kokoa mamorona ny tatoazy manaraka. Anjely iray izay toa miaro fasana roa, ny an'ny vehivavy sy ny an'ny renin'ny olona manao tatoazy.
Ny anjely potraka dia olona voaroaka avy any an-danitra, koa nesorina ny elany noho izy nikomy tamin'Andriamanitra. Misy anjely lavo maromaro, ohatra, fantatra amin'ny anarana hoe Grigori, Mephistopheles (asongadin'ny kilasin'i Goethe), Semvazza, ary angamba ilay Losifera fanta-daza indrindra. Ity tatoazy ity dia maneho fikomiana, ny zava-misy tsy te hanaraka ny baikon'iza.
Ny teny kerobima anankiray toa avy amin'ny teny hebreo izy io kerobima anankiray, izay mety hidika ny manaraka na segondra, izany dia milaza ny amboarampeo anjely mitarika ny serafima. Ireo izay eo amin'ny toerana avo toy izany ihany no mahita ireo kerobima azon'izy ireo atao ny lanitra. Araka ny voalazan'ny Baiboly, ny kerobima dia miadidy ny hidera an'Andriamanitra. Amin'ny ambaratonga tatoazy, ny kerobima dia manome fahatsapana fahatsarana, tsy toy ny tatoazy anjely lavo na ny anjelin'ny fahafatesana.
Ny safidy hafa amin'ny tatoazy dia ny elatry ny anjely. Misy tatoazy maro toy izany, fa matetika dia tatoazy roa ao an-damosin'izy ireo izay maneho ny elatra roa. Manafina dikany maro io tatoazy io, mety hidika hoe mitady fahalalahana ilay olona manao tatoazy, na mahatadidy olona maty.
Karazana anjely hafa
Araka ny lazainay foana aminao, ny eritreritrao no fetra. Ohatra, amin'ity tranga ity dia nisy olona nieritreritra ny mampifangaro Igor amin'ny anjely iray hanome azy io fikitika malefaka io.
Manana ohatra iray hafa momba ny anjely koa isika, mitambatra zazavavy manao maoderina na fomba Art Nouveau miaraka amin'ny elatry ny anjely. Ny vokatr'izany dia ity tatoazy mahafinaritra ity. Ny mikasika ny loko dia mety ho tena tsara koa, indrindra raha aingam-panahy ianao ohatra amin'ny vanim-potoana amin'ny taona.
Tato anjely sy demonia mifangaro
Raha ny momba ny fanehoana tombokavatsa an'ny anjely sy ny demonia dia misy safidy sy safidy hafa. Azontsika atao ny manao tombokavatsa elatra anjely sy elatra demonia, na dia afaka misafidy ny hisambotra ady aza isika. Ary ho an'ireo tia ny zava-misy dia mazàna no nofidina mba hampisehoana endrika sy sary an'ny fivavahana kristianina eo amin'ny hoditra.
Saingy tsy ny zavatra rehetra dia mandalo anjely na demonia, araka ny efa noresahintsika tetsy aloha. Ny sasany mino fa afaka manana ny roa ianao, satria ny olona tsy iray na ny iray hafa, tsy mainty na fotsy izahay, fa kosa aloky ny volondavenona afaka miova arakaraka ny fotoana.
Noho izany dia azo aseho amin'ny tatoazy roa izy, anjely sy demonia. Mahaliana izany, satria singa miverimberina amin'ny sariitatra maro izy io, izay maka fanahy ny devoly ny iray amin'ireo olona raha manana anjely kely kosa izy milaza azy fa tsy tokony hanao izany.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra momba ny tatoazy anjely sy demonia ity dia nanome aingam-panahy anao hahita ny volavola lavorary. Lazao aminay, manana tatoazy toy izao ve ianao? Misy endrika ve tianao indrindra? Lazao anay izay tadiavinao amin'ireo hevitra ireo!
Sarin'ny Tatoazy anjely sy demonia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy ara-pinoana » Tato anjely sy demonia
Tato-jiro, fanangonana endrika sy hevitra
Tato Daisy: fanangonana endrika sy dikany